admin, Author at ALANZAYAR - Page2of 295
ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်း မကပ်ပေး၍ သွားပြောဆိုသည့် ပြည်သူအား ရာအိမ်မှူးက လက်သီးဖြင့် ထိုးနှက်ဟုဆို(ရုပ်သံ)
ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်း မကပ်ပေး၍ သွားပြောဆိုသည့် ပြည်သူအား ရာအိမ်မှူးက လက်သီးဖြင့် ထိုးနှက်ဟုဆို(ရုပ်သံ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့နယ်၊ မြိတ်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်တန် (၁)ရပ်၊ နံ့သာဖြူလမ်းတွင် ဩဂုတ် ၇ရက်နေ့ ၅နာရီခွဲခန့်က မဲစာရင်းမေးမြန်းရာမှ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ”ကျွန်တော့်က ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်း ပြည်သူများ သိရှိအောင် မထုတ်ပြန်သေးလို့ သွားမေးတယ်။ […]
မိန်းမက ယောက်ျားရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကို ယောက်ျားဖြစ်သူက သိသွားတော့ …. (ရုပ်သံ)
မိန်းမက ယောက်ျားရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကို ယောက်ျားဖြစ်သူက သိသွားတော့ …. (ရုပ်သံ) TIK TOK မှာအရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါဗျာ။ ကောင်မလေးကသူ့မှာယောက်ျားလဲရှိပါရက်နဲ့ သူ့ယောက်ျားရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေးက အရမ်းကိုနာမည်ကြီးပြီး အရမ်းလည်းကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်နော်။ ကောင်မလေးကသူ့ယောက်ျားကို အရွဲ့တိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ခုလိုလုပ်တယ်ဆိုလဲ မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ ကောင်မလေးကပဲတကယ်ဖောက်ပြန်တာလား။ ဒါမှမဟုတ်ကောင်လေးကပဲ စွတ်စွဲနေတာလား […]
အိုးးး မေမေရေ အဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်ရသည် အမေစုကို ချစ်တဲ့ မြင်းမူမြို့က မိန်းခလေး (ရုပ်/သံ)
အိုးးး မေမေရေ အဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်ရသည် အမေစုကို ချစ်တဲ့ မြင်းမူမြို့က မိန်းခလေး (ရုပ်/သံ) ကျမတို့ မြင်းမူက ရဲရဲတောက်ပါ အမေစုကို လေးစားချစ်ခင်သော ကျမတို့ရဲ့ NLDပါတီ လူငယ် ညီမလေး သန္တာစိုးလင်းပါ။ တက်တူးဆရာကလည်း မြင်းမူ တပင်ရွေထီးရပ်က မြိုးကြီး တက်တူးဆိုင်ကပါ။ အမေစု ပုံတူရေးဆွဲနိုင်တာ […]
မြင့်မြတ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အထင်အမြင်လွဲမှားနေသူတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
မြင့်မြတ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အထင်အမြင်လွဲမှားနေသူတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာယုန်လေးကတော့ ” ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ” သီချင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အဘက်ဘက်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံစားနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးက ထိုသီချင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး တင်ဆက်ပြသပုံမှားယွင်းခဲ့တာကြောင့် သူကိုယ်တိုင်ထိုသီချင်းကို ဖျက်ချပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေကိုလည်း တောင်းပန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ […]
အရင်တုန်းက ငပေါမ ဆိုပြီး အဖက်မလုပ်ကြဘူး ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
အရင်တုန်းက ငပေါမ ဆိုပြီး အဖက်မလုပ်ကြဘူး ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး အနုပညာ လောကထဲ ဝင်ခါစ အချိန်မှာ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် တစ်ယောက်က အနုပညာကြေး ပေးမယ်ဆိုပြီး ပွဲတစ်ပွဲ ဖိတ်ခဲ့တယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ကပြဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပေမယ့် တစ်ပြားမှ မရခဲ့ပါဘူး။ နာမည်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တစ်နပ်စား ဉာဏ်လုပ်သွားခဲ့တယ်။ […]
လမ်းမပေါ်တက်ပြီး ဖိုက်တာလုပ်တော့ ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းခံရတာတောင် နည်းသေးတယ် (ရုပ်သံ)
လမ်းမပေါ်တက်ပြီး ဖိုက်တာလုပ်တော့ ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းခံရတာတောင် နည်းသေးတယ် (ရုပ်သံ) လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကားရပ်ပြီး ဖိုက်တာလုပ်တာ လမ်းသွားလမ်းလာသူတွေ ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းတာ ခံရတဲ့ငနဲ။ လမ်းမပေါ်တက်ပြီး လူမိုက်လုပ်တော့ ခံရပြီပေါ့။ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေးတွေ ပေးသွားကြပါ အုံးနော်။ Crd လမျးမပျေါတကျပွီး […]
ကြည့်ရှုသူတွေ မျက်နှာမလွှဲချင်အောင် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆရာမလေးရဲ့ အကအလှ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး…
ကြည့်ရှုသူတွေ မျက်နှာမလွှဲချင်အောင် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆရာမလေးရဲ့ အကအလှ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး… တိုင်းတစ်ပါးယဉ်ကျေးမှုတွေ အများဆုံးစိမ့်ဝင်လာတဲ့ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုခေတ်ကြီးထဲမှာ ခေတ်ပေါ်အကတွေကို စိတ်ဝင်တစားသင်ယူနေသူတွေများလာပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကတွေကို စိတ်ဝင်တစားသင်ယူမယ့်သူတွေကတော့ တဖြည်းဖြည်းရှားလာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ်ပညာရေးစနစ်အရ အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ အခြေခံကဗျာလွတ်အကနဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကတွေကို သင်ကြားဖို့ သတ်မှတ်လိုက်တာကတော့ တကယ်ကို ဝမ်းသာစရာပါ။ မြန်မာအကကို […]
အလန်းစားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းလှနေပြီး အသည်းယားစရာကောင်းလောက်အောင် အပီအပြင်ကပြထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
အလန်းစားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းလှနေပြီး အသည်းယားစရာကောင်းလောက်အောင် အပီအပြင်ကပြထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် မင်းသမီးချောလေး ဖြူဖြူထွေးကတော့ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာတင် နာမည်ရအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေအပြင် ကြော်ငြာတွေပါ မနားတမ်းရိုက်ကူးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက ရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားကောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မိဘနှစ်ပါးကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ […]
ဘိုကေအသစ်လေးနဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလောက်အောင် အထာကျကျ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ မြတ်သူလေး
ဘိုကေအသစ်လေးနဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလောက်အောင် အထာကျကျ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ မြတ်သူလေး ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ စွယ်စုံရမင်းသားကြီး မြင့်မြတ်ကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းထက်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အကြိုက်တွေ့နေကြတာပါနော်။ အကယ်ဒမီဆုကိုလည်း ထိုက်တန်စွာရရှိထားတဲ့ မြင့်မြတ်က အခုလက်ရှိမှာလည်း မိသားစုကို အချိန်ပေးသလို အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း များစွာလုပ်ကိုင်နေတာပါ။ […]
တစ်ရက်ကို သိန်း ၃၀ ဖိုးလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးရေမုန့်
တစ်ရက်ကို သိန်း ၃၀ ဖိုးလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးရေမုန့် ရန်ကုန် – ပြည်လမ်းတစ်လျှောက်ဟာ မြို့တွေတစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ဖြတ်ပြီးသွားရသလိုပဲ စားစရာတွေဟာလဲ မြို့တိုင်းမှာရှိနေလို့ ဟိုမြို့ ခနရပ် ဒီမြို့ ခနားနား ဆင်းဝယ်နဲ့ ကို တစ်လမ်းလုံးမအားရပါဘူး။ ခုလည်း အသိတစ်ယောက်က နတ်တလင်း မြို့ရောက်ရင် ရေမုန့် စားကြည့် […]